Wafdi ka socda Mareykanka oo Muqdisho yimid | KEYDMEDIA ONLINE
Wafdi ka socda Mareykanka oo Muqdisho yimid
Wafdi ka socda dowladda Mareykanka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana lagu soo warramayaa in ay halkaas kula shiri doonaan madaxda dowladda Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xubno kamida shaqaalaha shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo ay wehliyaan wafdi ka socda xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee ka socda wadamada Bariga Afrika ayaa maanta shir ku qaadan doona garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Xubnahan ka socda dowladda Mareykanka waxay sidoo kale la kulmayaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo kala hadlaya xaaladda xasaasiga ah ee doorashooyinka Soomaaliya.
Madaxweynaha Mareykan Joa Biden wuxuu la kulmay Xoghayaha Arimaha Dibada wuxuuna ku nuuxnuuxsaday hadafka Mareykanka ee ah in la xaqiijiyo dimuqraadiyada asxaabteeda ee waddamada Afrika.
Safiirka dowladda Mareykanak Donald Yamamotto ayaa qeyb ka ah shirka, isagoo horay dhowr jeer ugu cel-celiyay in aan la aqbali doonin doorasho muran ku jiro oo waddanka ka qabsoonta iyo sidoo kale qalalaase in lagaliyo waddanka oo muddo sanado ah kasoo kabsanaya dagaallo sokeeye iyo bur-bur.